ဒီတပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ မျက်မှောက်သတင်းလောကမှာ သုံးနှုန်းနေတဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို့ဖြစ်တဲ့ Whistleblower, Double-edged sword နဲ Beyond the pale တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
Whistle (၀ီစီ) blower (မှုတ်သူ) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ၀ီစီမှုတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးဆင်းသက်လာတာက တချိန်က အင်္ဂလိပ်ရဲတွေဆီကလို့့ဆိုပါတယ်။ ဥပဒေချိုးဖေါက်ရာရောက်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးကျူးလွန်တာမျိုးတွေ့ရင် အနီးတ၀ိုက် ရှိ လူတွေရော တခြားရဲတွေပါ သိနိုင်အောင်၊ တနည်းအန္တရာယ်ကိုအသိပေးနိုင်အောင် ၀ီစီမှုတ်ပြီး သတိပေးရာက ဒီအသုံးဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လူတဦးအနေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတရပ်၊ လုပ်ငန်းခွင်စသဖြင့်မှာ ဥပဒေချိုးဖေါက်ရာရောက်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးကျူးလွန်နေတာမျိုး၊ အဂတိလိုက်စားတာမျိုး၊ ပြည့်သူ့ဘဏ္ဍာငွေ အလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုး၊ အလဟသဖြုန်းတီးပစ်တာမျိုး၊ ပေးအပ်ထားတဲ့ အာဏာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ မညီဘဲချိုးဖေါက်ပြီး မလုပ်သင့်မလုပ်အပ်၊ မလုပ်မလုပ်ထိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးလုပ်နေတာကိုတွေ့လို့ သက်ဆိုင်ရာကို တာဝန်သိသိ၊အသိစိတ်ရှိစွာနဲ့အကြောင်းကြားတိုင်ကြားတဲ့ လူမျိုးကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Whistleblower ဖြစ်နိုင်ဖို့က အသိစိတ်ရှိဖို့နဲ့ သတ္တိရှိဖို့လည်း လိုတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ အမေရိကန်အစိုးရ လုပ်ငန်းခွင်မှာတော့ အသိစိတ်နဲ့ တိုင်တန်းတာမျိုးဆိုရင် အဲဒီ Whistleblower အပေါ်လက်တုံ့ပြန်ခြင်း မခံရလေအောင် ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ပေးထားတာ ရှိပါတယ်။ ဒီအသုံးကို လာမယ့် ၂၀၂၀ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ Democrat ပါတီ ရဲ့သမ္မတ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ဖို့ တစ်ပြေးနေတဲ့ ဒုတိယသမ္မတဟောင်း Joe Biden ရဲ့သားဖြစ်သူ Hunter Biden ဟာ သူ့အဖေ ဒုတိယသမတ ဖြစ်စဉ်က Ukraine သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်းကြီးမှာ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကာလအတွင်း၊ မသင်္ကာဖြစ်စရာတွေရှိခဲ့ရင် စုံစမ်းပေးဖို့ သမ္မတ Donald Trump က Ukraine သမ္မတသစ် Volodymyr Zelensky နဲ့ July လ က Telephone ပြောစဉ် ထည့်ပြောခဲ့တာကို အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးဌာနမှာ လုပ်တဲ့လူတဦးက သိခဲ့လို့ သမ္မတတဦးအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်ဖက်ဖြစ်နိုင်သူရဲ့သားနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုလို နိုင်ငံခြားခေါင်းဆောင်တဦးကို စုံးစမ်းခိုင်းတာဟာ သမ္မတတဦး စောင့်ထိန်းရမဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ မညီဘူးလို့ ယူဆတဲ့အတွက်၊ သက်ဆိုင်ရာကို တိုင်ကြားခဲ့လို့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ အဲဒီလူကို Ukraine Whistleblower လို့ ကင်ပွန်းတပ်ပြီး ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ သမ္မတ Trump အပေါ် impeach ဆိုတဲ့အရေးယူဖို့ အရင်က ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ Democrat အမတ်တွေအနေနဲ့ ဒီတခါ ပိုနီးစပ်လာပြီဆိုပြီးThe Washington Post သတင်းစာကြီးက “The Ukraine whistleblower complaint makes impeachment more likely” ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
John told me he was the “whistleblower” who reported his boss’s misconduct in the office.
ဆရာသမားရုံးမှာ မတော်တရော်တွေလုပ်နေတဲ့အကြောင်း သက်ဆိုင်ရာကို တိုင်တန်းခဲ့သူက သူပဲ ဖြစ်တယ်လို့John က ကျနော့်ကို ပြောပြတယ်။
Double-edged (နှစ်ဖက်အသွား)၊ Sword (ဓါး) ဖြစ်ပြီး ဒီစကားစုရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က အသွားနှစ်ဖက်စလုံး ရှတဲ့ဓါး ဖြစ်ပါတယ်။ အသွားနှစ်ဖက်ရှတဲ့ ဓါးမျိုးကတော့ သာမန် မီးဖိုချောင်သုံးဓါးလို အသွားတစ်ဖက်ရှတဲ့ ဓါးနဲ့စာရင် ပိုပြီးထက်သလို ဓါးရှနိုင်မယ့် အန္တရာယ်လည်းပိုရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်း ကောင်းတာတွေလည်း ရှိသလို၊ မကောင်းတာတွေလည်းရှိတဲ့သဘော ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Double-edged sword ရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်က အဆိုးအကောင်း ဒွန်တွဲနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို စောစောက Ukriane Whistleblower ကိစ္စနဲ့ပဲ ပတ်သက်ပြီး၊ အခုသမ္မတ Trump အပေါ် အရေးယူစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ဒီမိုကရက်အမတ်တွေက ပြင်ဆင်နေကြတာကြောင့် ဒီအခြေအနေဟာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီမိုကရက်ပါတီရဲ့ သမတလောင်းဖြစ်ဖို့ လောလောဆယ် တစ်ပြေးနေတဲ့ ဒုတိယသမ္မတဟောင်း Joe Biden အတွက် အကျိုးရှိစေနိုင်ပေမယ့် တဖက်မှာလဲ သူ့သား Hunter ဟာ Ukraine စွမ်းအင် Company နဲ့ လုပ်ကိုင်စဉ်က ထိုစဉ် ဒုတိယသမ္မတအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ Biden အနေနဲ့ အာဏာသုံးခဲ့တာများ ရှိသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေလည်း ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက် သူ့အပေါ်လည်း အမှုလာပတ်နိုင်တာကြောင့် Ukriane အချေအတင်အငြင်းပွါးဟာ Biden အတွက် အဆိုးအကောင်း ဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီး Foxnews မှာ “Ukraine controversy turns into double-edged sword for Biden“ ဆိုတဲ့ ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Freedom of expression isa“double-edged sword.” It gives individuals the right to speak freely. But free expression also can cause problems.
လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုခွင့်ဟာ အဆိုးအကောင်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီအခွင့်အရေးကြောင့်၊ လူတွေအနေနဲ့ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခွင့်ရှိကြပေမယ့် တဘက်မှာလည်း ပြဿနာတွေ တက်နိုင်စေနိုင်ပါတယ်။
(၃) Beyond the pale
Beyond (ကျော်လွန်တာ) ၊ the pale က Latin ဘာသာက ဆင်းသက်လာပြီး (ခြံစည်းရိုးခတ်တဲ့ သစ်သားတိုင်) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က (ခြံစည်းရိုးခတ်တဲ့ တိုင်ကိုကျော်တာ) ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကလည်း သိပ်မကွာလှပါဘူး၊ အပြောအဆို အပြုအမူတွေမှာ စည်းကျော်တာ၊ ဘောင်ကျော်တာ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ လက်ခံနိုင်စရာမရှိတာ၊ မသင့်တော်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကြီးမှာ ဥတုရာသီ ပြောင်းလဲမှုကို အရေးယူလုပ်ဆောင်ဖို့တက်ကြွလှုပ်ရှားနေသူ ဆွီဒင် ဆယ်ကျော်သက် Greta Thunberg က ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ဝေဖန်ခဲ့ရာမှာ၊ အများက သဘောကျထောက်ခံပေမယ့် အမေရိကန်သမ္မတ Trump က သူ့ twitter မှာ Greta နဲ့ ပတ်သက်လို့ ခနဲ့တဲ့တဲ့ ရေးခဲ့တဲ့အတွက် ဒါဟာ သိပ်ကိုဘောင်ကျော်ရာ ရောက်တယ်ဆိုပြီး CNN သတင်းဌါနကြီးက “Donald Trump's attack on Greta Thunberg is WAY beyond the pale” ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
His rude behavior at the party last night was “beyond the pale” for the host.
ညကပါတီပွဲမှာ သူ့ရဲ့ ရိုင်းပြလှတဲ့ အပြုအမူဟာ အိမ်ရှင်ဖြစ်သူအတွက် ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိုင်လို့ မရဘူး။